Ọ bụrụ na ị na-eji ihe Apple ngwaọrụ, ị ga-ama na ngwaọrụ gị Nwela kwadoo mgbe ị jikọọ ya iTunes. Ọ dị mkpa na-eso ụfọdụ Atụmatụ na ekele gị ndabere faịlụ n'ihi na mgbe ị na-data, ọ bụ ndabere faịlụ nke nwere ike ekwe ka ị weghachi ya.
Kwesịrị, ị kwesịrị ị na hụ na gị na kọmputa nwere ọhụrụ iTunes version arụnyere mere na i nwere ike inwe ihe ndị kasị nke ndabere faịlụ. Ebe anyị na-aga ikwu okwu nke 7 nke kasị mma Atụmatụ maka ndabere faịlụ.
Ọ bụrụ na ị nwere furu efu nkọwa na gị iPhone na ị na-achọ iji weghachi gị faịlụ, ị ga-mkpa enyemaka nke gị ndabere faịlụ. Nkwado ndabere na mpaghara faịlụ nke na-echekwara na gị iTunes bụghị ogugu nke pụtara na ị ga-adị mkpa a ndabere extractor maka ọrụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ndabere maka iPad na ị na-eweghachiri ya ọzọ Apple ngwaọrụ dị ka iPhone, ị ga-enwe ike iji weghachi faịlụ niile dị ka igwefoto mpịakọta photos, ozi na ọbụna olu memos. Nke a bụ ya mere i kwesịrị ezi software zuru ezu transfer maka gị ndabere.
Otu n'ime ewu ewu na irè software nke nwere ike ịbụ kemfe bụ Wondershare Mobile Trans. Nke a software e mere na-ekwe ka ị na-adị mfe weghachite faịlụ site na otu agadi nkwado ndabere na mpaghara weghachite data na ngwaọrụ gị. Ka anyị hụ otú anyị nwere ike mezuo nke a.
Download Wondershare Mobile Trans na ẹkedori ya na gị na PC
Ozugbo i na-agba ọsọ a ngwa, ị kwesịrị ị na isi 'Weghachi Site Backups' mode.
Ị ga-ahụ a dropdown ndepụta ebe a ga-enwe multiple nhọrọ.
Họrọ 'Site iTunes ndabere File'
Were eriri USB na jikọọ na ngwaọrụ gị na PC
Mgbe ekwentị achọpụtara, ị ga-ahụ ya na ngwa windows
Ị ga-ahụ ndepụta nke ndabere jupụtara n'ime na window
Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ nke na ị chọrọ iji weghachi
Ugbu a, ị ga-enwe a ndepụta nke data ụdị.
Pịa data nke ị chọrọ iji weghachite
Pịa na weghachi
iPhone ọrụ nwere ike weghachite kọntaktị, foto, videos na ozi ederede
Azọpụta gị weghachiri eweghachi faịlụ na chọrọ ebe ke gị PC
Encrypt iPhone ndabere
Ọ bụrụ na ị na-enwe nchegbu banyere gị nche na ị na-achọghị gị data na-zuru hackers ma ọ bụ intruders, ọ na-gwara encrypt gị ndabere faịlụ. Gị ndabere faịlụ nwere ike mfe eji ka ịnweta gị onwe data na nke a bụ ihe mere encrypting-atụle ga-a ike nhọrọ.
Ebe a bụ otú ị pụrụ ime ya.
Jikọọ na ngwaọrụ gị ka iTunes na ego na ngwaọrụ na sidebar.
Ime ka nchịkọta taabụ ma ị ga-ahụ a button akpọ 'nhọrọ' na ala.
Ikpeazụ checkbox agụ, 'encrypt iPhone ndabere'.
Ego na na nhọrọ.
A ọhụrụ igbe ga-apụta.
Gị mkpa iji tinye a paswọọdụ.
Nkwado ndabere na mpaghara e ezoro ezo na gị mkpa iji tinye paswọọdụ mgbe ị weghachi ekwentị gị n'iji ndabere.
Jikwaa ngwa data
Mgbe i nwere gị ndabere faịlụ na ị na-achọ jikwaa ngwa data, ị ga-mkpa ịchịkwa égwu nke na-kwadoo gị iTunes. Ebe a bụ otú ị nwere ike nweta nke a.
Ịkwaga na ntọala gị na iPhone
Pịa na iCloud
Enweta na nchekwa
Pịa nhọrọ, 'Jikwaa Nchekwa'
Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu Apple ngwaọrụ, họrọ onye nke na-ịchọrọ ị ịchịkwa site na ịme ọpịpị aha nke ngwaọrụ gị
Ị ga-ahụ ndepụta nke ngwa n'okpuru ndabere nhọrọ.
Gbanyụọ ọ bụla ngwa nke ị na-achọghị ka ndabere.
Ị ga-jụrụ maka a nkwenye, họrọ 'gbanyụọ ma hichapụ'
Ihichapụ metụtara ndabere si iCloud.
Ndabere ngwa ọdịnala na iTunes
Mgbe ị na-achọ nkwado ndabere na mpaghara ngwa ọdịnala na gị iTunes, ị nwere ụzọ dị mfe nke na-eme ya. Nanị na-eso nzọụkwụ ndị a.
Open iTunes na PC gị na
Eso nke a igodo.
File Devices ndabere
ITunes ga-akpaghị aka ndabere ọdịnaya ugbu a na ngwaọrụ gị.
Ị nwere ike pịa on iTunes mmasị na mgbe ahụ isi ngwaọrụ.
E ị ga-ahụ tour ndabere faịlụ tinyere ụbọchị na aha nke ngwaọrụ gị.
Hichapụ iTunes ndabere na kọmputa
Ihichapụ ndabere na gị na kọmputa bụ mara mma dị mfe na-egbu.
Mepee iTunes na mgbe ahụ kwaga mmasị
Ị ga-ahụ ndepụta nke ngwaọrụ tinyere backups
Chọta ndabere nke ị chọrọ ka ihichapụ
Pịa na nkwado ndabere na mpaghara nhọrọ na iti ihichapụ
Gbanwee iTunes ndabere ọnọdụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịgbanwe ọnọdụ gị ndabere, ebe a bụ otú ị nwere ike nweta nke a.
iTunes backups na-echekwara na
C: \_ Ọrụ \_\_ AppData \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere.
Aha njirimara bụ n'ezie aha gị PC
Ugbu a, ike a ọhụrụ nchekwa maka na nkwado ndabere na mbanye nke gị nhọrọ
Ugbu a, anyị kwesịrị ejikọta ihe ọhụrụ nchekwa ka ndabere faịlụ.
Tinye dị ka onye nlekọta na pịnyere ndị na-esonụ iwu.
mklink / J "% AppData% \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere" "D: \_ ndabere"
Hụ na ị na ugbu a na ịkpọ ndị ndekọ na nchekwa aha.
Lee 'ndabere' bu aha nke ọhụrụ anyị nchekwa.
Nkwado ndabere na mpaghara ebe e ọma gbanwere.
Ele iTunes ndabere
Iji na-ele iTunes ndabere, ịkwaga ~ / n'ọbá akwụkwọ / ngwa nkwado / mobilesync / ndabere
Ị ga-ahụ ndepụta nke iche iche na ngwaọrụ na nkwado ndabere
Anya na aha nke ndabere tinyere timestamp ịchọta nkwado ndabere na mpaghara gị mkpa.
Olee otú dezie iTunes Library
Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere iTunes Njikwa Ịkekọrịta
> Resource> iTunes> 7 Bara Uru iTunes ndabere Atụmatụ ị kwesịrị ị na Miss